राम्रो कुरो, तर लागू होला त ? « paniphoto
« ढोगाईको सर्त बिरामी हुनुहुन्छ ? अब उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्नेछ »	राम्रो कुरो, तर लागू होला त ?
By -paniphoto- on Monday July 30, 2012	-माधवरत्न ख्वबी-
चुनावमा पार्टीका शिर्षनेताहरुले हारिन्छ कि भनेर दुई ठाउँबाट लड्ने गर्छन् । एक ठाउँबाट हारे पनि अर्कोबाट कसो नजितिएला भन्ने उनीहरुको सोचाइ नै यस्को एकमात्र कारण हो । तर यो सोच निसकोंच आफै प्रतिको अविश्वास हो । यसर्थ आफुमा हिम्मत र इमान्दारिता छ भने एकै ठाउँबाट उठे पनि चुनाव जित्न सकिन्छ तर आफैप्रतिको अविश्वास र डरछेरुवा पाराले जति ठाउँबाट चुनावमा उठे पनि मरिगए जित्न सकिदैन ।
फेरि दुई ठाउँबाट चुनावमा उठेकाहरुले दुबै ठाउँबाट जिते एक ठाउँ छोड्नु पर्ने हुन्छ र सो ठाउँमा पुन: उपचुनाव गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा समय र पैसा दुबैको बर्बादी मात्रै हुन्छ । प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छेदारले संविधानसभामा दुबै क्षेत्रबाट जितेपछि सोही ठाउँमा फेरि गरिएको चुनावको हैरानीले पनि प्रस्ट पार्छ ।
अहिले निर्वाचन आयोगले यस्तै बर्बादी र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अब उप्रान्त कुनै पनि उम्मेदवार एक ठाउँभन्दा बढीबाट चुनाव लड्न नपाउँने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । जसका लागि निर्वाचन आयोग ऐन २०६३, मतदाता नामावली ऐन २०६३, संविधानसभा सदस्यता ऐन २०६४ संशोधन गर्न लागेको जानकारी समेत उसले दलहरुलाई गराइसकेको छ ।
यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो । यसले गर्दा चुनावकै लागि मुलुकलाई दोहोरो भार पर्दैन । यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
तर योसँगै केही बिरोधका स्वरहरु पनि सुनिएका छन् । पार्टीका अध्यक्षलाई वा पदाधिकारीलाई भने दुई ठाउँबाट चुनाव लड्न दिनु पर्ने भन्दै कराउँनेहरु पनि छन् । तर यो त ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भने जस्तै भएन र ? लोकतन्त्रमा पक्कै यस्तो हुने छैन ? आशा गरौं, अबको चुनावमा दोहोरो चुनावको झन्झट गरिरहनु पर्दैन ।
यो कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् है ।
« ढोगाईको सर्त बिरामी हुनुहुन्छ ? अब उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्नेछ »	2 comments to राम्रो कुरो, तर लागू होला त ?
· जवाफ दिनुहोस्	नेपालमा यो मात्र हैन धेरै राम्रा कुराहरु आउँने गर्छन् प्रस्तावका रुपमा . तर कार्यान्वयन त उही हो . आफैलाई घाटा हुने कुरा पनि गर्छन् कसैले ? यो कार्यान्वयन गरे नेताहरुलाई नै घाटा हुन्छ
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	nabin nepal
· जवाफ दिनुहोस्	आफैप्रतिको अविश्वास र डरछेरुवा पाराले जति ठाउँबाट चुनावमा उठे पनि मरिगए जित्न सकिदैन ।.(((((.उधाहरण को लागि माकुने लै हेरुम न पनि लेखेको भा सुन मा सुगन्ध हुन्थो नि गणेश जी ..:D
Time ago 23 Days via WordPress.com
यही Category बाटहो प्रचण्ड कमरेड, एमाङ्ग्रेस एनजिओ नै हुन् तर तपाईहरु नि ?दण्ड-क्षमा कि अर्कै केहि ?जे भयो, तपाई हाम्रै कारणले भयो । नथाकौं ।ख्याती चाहिएन, नतिजा निस्कियोस्भोली खानका लागि अमेरिकी प्लेन पर्खेर बस्ने दिन नआओस्विल ओरेलीलाई खुला पत्र – सुदर्शन सुवेदी ‘त्यो नेपाली मान्छे’ मात्र होइनन्हामी फगत पिँधबिनाको लोटा !पढ्न, पढाउँन चै नपाउँने तर उत्तर चै दिनै पर्ने ?रेमिट्यान्सबाट लोभिने कि जोगिने !आधा नेपाललाई जेल बनाऔँ, सबैलाई थुनौँOnline Users7 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार